Toa efa niomana tamin’ny gidragidra sy ady an-trano tamin’ny alalan’ny fampidirana fitaovam-piadiana tsy mazava, fony izy tsy filoha akory. Nipoapoaka ny fanambarana momba ny IEM efa tany amin’ny fiandohan’ny taona 2018 fa programan’asa efa noketrehina nandritra ny 4 taona io. Nisisika avy eo ny velirano. Inona no nitranga anefa avy eo ? Tsy arakaraka ny filazana fa ho haingam-pandeha ny fomba fiasa. In’enina teo ny filoha no nivoaka tany ivelany, tsy hita izay tena vokatra nefa vola be no lany. Nikatso ilay TGV, hoy ny mpanara-baovao. Ireo minisitra notendrena tany am-piandohana, nolazaina fa araha-maso akaiky ary hisy ny tomban’ezaka ao anatin’ny enim-bolana voalohany, dia ny teo ihany no naverina afa-tsy minisitra iray monja. Nahavita azy daholo izany ireo ve ? Inona no mari-drefy nampiasaina sa mba resaka fotsiny iny ? Aty amin’ny tapaky ny volana aogositra namelabelarana ny fandaharanasa ankapoben’ny fitondram-panjakana vao hoe izao sy izao no hotanterahana amin’ny 2020, ka ny tetibolam-panjakana amin’io taona ho avy io dia ampifanarahana amin’ny velirano sy ny fampanantenana natao tamin’ny vahoaka. Nanao ahoana izany ity 2019 ity ? Fanohizana sy fijapiana ny nataon’ny teo aloha fotsiny no hita. Nipoitra ny olana isan-karazany toy ny tsy fandriampahalemana, fahatapahan’ny jiro sy ny rano manerana an’i Madagasikara, fisondrotry ny vidim-piainana ,.. Tsy mbola hita popoka ny famatsiam-bola goavana hatreto. Mbola mitazana ve ireo mpiara-miasa sa sanatria tena tsy mahatoky mihitsy ? Tsy mbola nisy fototra iray na lanonana nametrahana vato fehizoro hanombohana ny asa amin’ilay building, trano 50 000 … Ny tanamasoandro moa tsy nanomboka akory dia efa miteraka fahasosorana noho ny fanjavozavon’ilay tetikasa goavambe sy ny resaka fanotorana tany.
MARO NY MPANDOTO RANO
Efa maro sahady ireo mpiara-miasa amin’ny filoha no mampiteny ny anarany sy manao fanamparam-pahefana. Manaratsy endrika an’i Andry Rajoelina izany ary mbola ho raharaha be tsy hiova ireo olom-bitsy ireo fa hanao ny ataony mandritra ny 4 taona ambiny. Ny samy ao anaty fanjakana mifanaratsy sy mifamoaka dosie maloto, toy ny depiote sy minisitra mifanaratsy amina raharaha famarotana tanim-panjakana. Misy milaza fa te hanao zavatra tsara ho an’ny firenena ihany ny filoha Rajoelina saingy tsy tafavoaka satria, hono, voafatotra. Inona no mamatotra azy ? Misy olona tena sahy misangy ny fahefana am-pelatanany, olona akaiky azy ihany ireo fa tsy mpanohitra akory, Eny. mety hisy ny ny hilaza fa izay 7 volana kosa ve dia hanaovana resa-be. Efa nisy tatitry ny 100 natao fa tsy hita izay eo. Ho vita indray ny herintaona amin’ny 19 janoary 2020 dia hiteny indray fa vao herintaona ve dia hitohy hiala bala sanatria rehefa tsy nahatanteraka ilay hafainganam-pandeha mafy be sy ny hoe ataontsika izay tsy vita tao anatin’ny 58 taona teo.